April 2021 - Somali Public Agenda
April 11, 2021 /0 Comments/in Commentary /by Mahad Wasuge
Faalladani waxa ay sharraxeysaa xaaladda cakiran ee doorashooyinka Soomaaliya ee xilligan, waxaa ayna soo jeedineysaa hannaan beddel u noqon kara heshiiskii 17-ka Sebteembar (kaasoo hadda u muuqda mid aan shaqeyn karin). Hanaankan ayaa la xiriira muddo kordhin 2 sano ah oo loo sameeynaayo baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la dooranaayo guddoomiyeyaal cusub. Hoggaanka cusub ee baarlamaanka ayaa waxa ay qabanqaabin doonaan doorashada Madaxweyne oo ay muddo xileedkiisu 2 sano noqoneyso. Madaxweynaha la dooranaayo waxaa uu dhisayaa dowlad loo dhan yahay. Dowladdan waxaa loo xilsaarayaa in ay abaabusho doorasho toos ah oo ka dhacda Soomaaliya 2 sano kadib, taasoo madaxweynaha ay doorteen Baarlamaanku uusan awood u yeelan doonin in uu noqdo musharrax. Kani waa hab cusub oo yeelan kara gaabis. Sikastaba ha ahaatee, faaladdaan ayaa ku doodeysa in ismariwaaga doorashooyinka ee hadda jira iyo duruufaha siyaasadeed ee aan caadiga ahayn ay u baahan yihiin tixgelinta xulashooyinka noocaan oo kale ah. Read more
https://somalipublicagenda.org/wp-content/uploads/2021/03/Somalia-Elections.jpg 364 660 Mahad Wasuge https://somalipublicagenda.org/wp-content/uploads/2019/04/SPA-Logo-278x300.jpg Mahad Wasuge2021-04-11 13:46:072021-04-11 13:46:07Jahwareerka Doorashada Soomaaliya: Hannaan Doorasho ee Beddeli Kara Heshiiskii 17-kii Sebteembar